Somali News 11.11.21
Qaybaha Siouxland waxay dhawaan heli karaan dhadhan xilli cusub! La-talinta Cimilada Jiilaalka ayaa bilaabanaysa caawa ilaa berri galab 15 degmo oo ku kala baahsan waqooyi-galbeed iyo waqooyi-bartamaha Iowa
Sarkaal ka tirsan Adeegga Cimilada Qaranka ayaa u sheegay Raadiyaha Iowa in wadista baabuurtu ay ku dhibtoon karto aagagga waqooyiga Iowa iyadoo hal ilaa laba inji oo baraf ah la filayo inuu ku soo da'o meel u dhow xudduudda Iowa-Minnesota.
Dhammaan Siouxland waxay hadda ku hoos jirtaa La-talinta Dabaysha ilaa habeen dambe.
Isbahaysi ay ku jiraan ururada shaqaalaha iyo kooxaha xuquuqda madaniga ah ayaa bilaabay shabakad iyo bogag warbaahinta bulshada si ay u helaan cabbir kor loogu qaadayo mushaharka ugu yar ee Nebraska oo la gaadhsiiyo $15 saacadiiba codbixinta sanadka soo socda. Kor u qaad Mushaharka wuxuu u baahan yahay inuu ururiyo 87,000 saxiixyada codsiyada marka la gaaro Juulaay 2022 si loo helo soo jeedinta warqada cod bixinta ee Noofambar 2022. Cabbirku wuxuu kordhin doonaa mushaharka ugu yar $1.50 sanadkii ilaa uu gaaro $15 sanadka 2026.
Siouxland waxay ku maamuustay Maalinta Halyeeyga dhowr xaflado, oo ay ku jiraan dhacdooyin ka dhacay Guriga Maxkamadda Degmada Woodbury, Beerta Xoriyadda ee Siouxland ee Koonfurta Sioux City halkaas oo xarig-goyn ay ka dhacday Xarunta Cusub ee Bud iyo Maalinta Doris ee cusub.
Sidoo kale, ardaydii ka socotay degmada Sioux City Community School ee barnaamijka ROTC waxay ku qabteen feejignaan 12-saac ah ee Taallada Floyd.
Western Iowa Tech waxay shalay aqoonsatay arday iyo xubno shaqaale ah oo ciidan iyo ruug-caddaa ah iyada oo loo sameeyay dabaaldeg gaar ah iyo xaflad calanka